Ake Sithi Qaphu Qaphu NgeDominican Republic | INcwadi Yonyaka Ka-2015
Izwe IDominican Republic yakhiwa izingxenye ezimbili kwezintathu zesiqhingi iHispaniola; ingxenye yesithathu yaso iHaiti. Leli zwe linamahlathi ashisayo, izintaba eziphakeme, amaxhaphozi nezingwadule. IPico Duarte iyintaba ephakeme kunazo zonke eDominican Republic, iphakeme ngamamitha angu-3 175 ngaphezu kolwandle. Ingxenye enkulu yogu inezihlabathi ezinhle ezimhlophe, futhi phakathi nezwe kunezigodi ezivundile, njengeCibao Valley ethelayo.
Abantu Izakhamuzi ziyingxube yabantu abadabuka eYurophu nase-Afrika. Kunamaqembu amancane abantu abahlukahlukene; abantu abavela eHaiti yibona abaningi.
Ulimi Ulimi olusemthethweni yiSpanishi.
Abazalwane nodade bajabulela ubudlelwane obumnandi
Indlela yokuziphilisa Izimayini, izimboni zikashukela, ezekhofi nezikagwayi bezilokhu ziyindlela eyinhloko yokungenisa imali. Muva nje umnotho uye wasimama ngenxa yokwanda kwezivakashi nezimboni ezikhiqizayo.
Isimo sezulu Isimo sezulu salapha sipholile, isilinganiso sezinga lokushisa saminyaka yonke singu-25°C. Isilinganiso semvula sonyaka sisuka emamilimitheni angaphezu kuka-2 032 ezindaweni ezinezintaba ezisenyakatho-mpumalanga siye emamilimitheni angaphansi kuka-760 ezindaweni ezomile. Lesi siqhingi sivame ukuhlaselwa izimvula ezinamandla neziphepho.
Amasiko Ukudla kwakhona kuhlanganisa ilayisi, ubhontshisi nemifino. Abantu balapha bathanda nokudla kwasolwandle, izithelo, upelepele nokhova othosiwe. Kusetshenziswa okunye kwalokhu kudla lapho kuphekwa isidlo esiyintandokazi esaziwa ngokuthi i-La Bandera Dominicana (ifulege laseDominican). Abantu bakulesi siqhingi bayazifela nge-baseball, umculo, nokudansa, ikakhulu umdanso okuthiwa i-merengue (umdanso okunyakaziswa kuwo ukhalo namahlombe). Isiginci sithandwa kakhulu kanjalo nezigubhu, imitshingo nama-marimba.
INANI LABAMEMEZELI NGO-2014
UMMEMEZELI OYEDWA KUMELWE ASHUMAYEZE ABANTU
INANI LABABEKHONA ESIKHUMBUZWENI NGO-2014